Ama-Dredges ngokwezifiso nezici ezikhethekile - ama-Ellicott Dredges
Ama-Dredges enziwe ngokwezifiso nezici ezikhethekile
Landa i-Spec Sheet
Igama lomkhiqizo lakwa-Ellicott ® liyaqhubeka ukuvela ngokufakwa kwezimpawu eziklanyelwe futhi ezenziwe, ezenziwe ngokwezifiso nezici. Ngesinye isikhathi ithimba lethu lonjiniyela abanethalente kanye nabasebenzi bezitolo abazinikezele babe nobumnandi bokuklama nokukhiqiza ezinye zezindawo ezinhle kakhulu ezisezingeni lomhlaba ezinezici ezenzelwe ukucaciswa kwekhasimende ngqo.
Ukusuka dredge eyenziwe ngokwezifiso ngokuphelele kuya ekunikezelweni kombuso kagesi, noma ngabe umsebenzi umkhulu kangakanani noma unselele kangakanani, iqembu lethu linikezelwe ukukhiqiza isisombululo esedlula ukulindelwa kwekhasimende lethu. Ngomsebenzi wethu kuma-dredges wangokwezifiso kanye nemishini ekhethekile, onjiniyela bakwa-Ellicott bathole ngaphezulu kwamalungelo obunikazi wamazwe angaphezulu kwe-20 ngemisebenzi ehlobene nokwenziwa kabusha kwe-dredge.
Igama lomkhiqizo liyaqhubeka ukuvela ngokungeniswa kwezindawo eziklanyelwe futhi ezenziwe, izizinda nezinto ezenziwe ngokwezifiso. Ngesinye isikhathi ithimba lethu lonjiniyela abanethalente kanye nabasebenzi bezitolo abazinikezele babe nobumnandi bokuklama nokukhiqiza ezinye zezindawo ezinhle kakhulu ezisezingeni lomhlaba ezinezici ezenzelwe ukucaciswa kwekhasimende ngqo.
Usayizi wokukhipha: 24 ″ - 36 ″ (610 mm x 914 mm)
Injini eyinhloko: 4,700 - 16,000 HP (3,470 - 11,931 kW)
I-Power @ Cutter Drayivu: I-850 - 3,000 HP
Ubunzulu bokuDonswa Okuphezulu: Ama-60 '- 100' (18 - 30 m)
Umkhiqizo wokuqala we-Ellicott® brand Wheel Dragon ™ iBucketwheel dredge owenziwe ngokwezifiso wethulwa ngo-1976. Kusukela lapho, i-Wheel Dragon red dredge isiyaziwa kakhulu ezabelweni zezimayini emhlabeni jikelele. Ukungezwa kwesikebhe samabhakede edreyini yakho kuzokhulisa amandla okusika nokukhiqizwa okuphelele. Ukuthi ukwenyuse umkhiqizo emkhakheni wezimayini zesihlabathi noma ukumba izimayini ezinzima kunazo zonke emhlabeni, i-Wheel Dragon red dredge yisixazululo sakho. Ukuguqulwa kokumba kwe-Wheel Dragon ™ kungenziwa kutholakale kumamodeli we-Ellicott Dragon® brand dredge.
• Idivaysi enhle yokumbula yezinto zokwakha ezinzima
• Izinga eliphakeme kakhulu lokutakula likwenza kube standard
umgubhi wezicelo eziningi zezimayini
Idizayini ye-Ellicott®'s Coastal Dragon® dredge ilungele ukusebenza ezindaweni ezingasogwini. ICoastal Dragon® dredge inama-tilting spuds angakhethwa avumela ukuthi i-dredge yethulwe ngaphansi kwezindlela eziphithizelayo futhi iqhubeke nokusebenza ngenkathi isebenza ngendlela enamanzi namabhuloho amaningi. Ukwandisa i-freeboard kuvumela iCoastal Dragon® ukuthi isebenze ezilwandle ngokuvuvuka okungalindelekile noma okungapheli. Idizayini yeCoastal Dragon® dredge ingangezwa kumodeli yethu ye-1170 Series Dragon® dredge nangaphezulu.
Njengenye indlela yezinjini zikadizili, i-Ellicott nayo inikezela ngemigwaqo kagesi. Lezi zindawo ezinamandla zisebenza ngamandla kagesi zisuka ogwini futhi zinosizo kumaphrojekthi wokusebenzisa isikhathi eside.
Njengoba kungekho injini yedizili, ama-dredges kagesi abiza kancane ukuligcina, futhi izindleko ezisetshenziswayo eziphansi zivame ukuphelisa utshalomali lokuqala oluphezulu.
IDrayivu kagesi inikezwa njengenketho kukho konke usayizi nohlobo lwezinhlobo ezikhiqizwe yi-Ellicott.
I-Wheel-Dragon ™ Bucketwheel Dredge